CL- Guruub F: Real Madrid oo guul kasoo gaartay kooxda Sporting CP oo ay booqatay, xilli Borussia Dortmund ay xaaqday Legia Warszawa… + SAWIRRO – Gool FM
CL- Guruub F: Real Madrid oo guul kasoo gaartay kooxda Sporting CP oo ay booqatay, xilli Borussia Dortmund ay xaaqday Legia Warszawa… + SAWIRRO
(Lisbon) 23 Nof 2016 – Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa guul kasoo gaartay Sporting CP oo ay booqatay , iyadoo dhinaca kale Borussia Dortmund ay xaaqday Legia Warszawa kulan la iska dhaliyey labada dhinac 12-gool.
Real Madrid ayaa goolka la horreysay waxaana qalad lagu galay Ronaldo oo uu dadab ka soo qaaday Luka Modric, uuna baasay Cristiano Ronaldo oo jiray xerada ganaaxa waxaa dhammaystiray kana faa’iidaysatay 29’daqiiqo Raphael Varane, kulanka ayaana sidaas lagu kala nastay 1-0 ay ku gacan sarreysay Real Madrid.
Qeybtii labaad ee ciyaarta 58’daqiiqo waxaa garoonka dhaawac uga baxay xiddiga Real Madrid ee Gareth Bale, waxaana lagu bedelay Marco Asensio oo ciyaarta soo galay.
Joao Pereira oo ka tirsan Sporting CP ayaa 64’daqiiqo garoonka laga saaray markii la tusay kaarka cas, laakiin taasi kama hor’istaagin inay barbaraystaan Real Madrid kulankan.
Sporting CP ayaana la timid goolka barbaraha waxaana 80’daqiiqo rigoore u dhaliyey Adrien Silva, markii laacibka kooxda Real Madrid ee Fabio Coentrao uu kubadda gacanta ku taabtay isagoo ku jira xerada ganaaxa, kulanka ayaana sidaas ku noqday barbaro 1-1.
Kooxda Real Madrid ayaa la timid goolka ay guusha ku qaadatay waxaana 87’daqiiqo u dhaliyey Karim Benzema oo kulanka bedel ku soo galay, kaddib karoos miisaaman oo uu ka helay kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos, ciyaarta ayaana ku soo dhammaatay 2-1 ay guul ku soo gaartay Los Blancos.
Real Madrid ayaa sidaas ku gashay kaalinta labaad ee guruubkeeda (F) ee Champions League waxaana ay leedahay 11-dhibcood taasoo horseed u noqotay inay Real Madrid u soo baxdo wareegga 16-ka Champions League, halka Borussia Dortmund ay guruubkan hoggaaminayso taasoo leh 13-dhibcood.
Dhinaca kale Borussia Dortmund ayaa 8-4 ku dharbaaxday Legia Warszawa kulan la iska dhaliyey 12-gool, sidaas ayeyna hoggaanka ugu qabatay guruubkan F.
Kala sarreynta guruubkan F ayaa ah sidan:-
TOOS u daawo: Sporting Lisbon vs Real Madrid, Borussia Dortmund vs Legia Warsaw
CL- Group H: Kooxda Juventus oo guul ka soo gaartay Sevilla, una soo baxay wareegga 16-ka koobka horyallada Yurub… + SAWIRRO